Wasaaradda amniga oo soo rogtay amar ka dhan ah Madeira iyo terminal-ka MOVECON oo la xiray - Caasimada Online
Home Warar Wasaaradda amniga oo soo rogtay amar ka dhan ah Madeira iyo terminal-ka...
Wasaaradda amniga oo soo rogtay amar ka dhan ah Madeira iyo terminal-ka MOVECON oo la xiray
Muqdisho (Caasimada Online) – Wasaaradda Amniga Gudaha Soomaaliya oo tixraaceyso warqadda tixraaceedu yahay Ref. OPM/0194/04/2022 ee ka soo baxday Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ayaa hey’adda socdaalka iyo jinsiyadaha ku amartay inay degenaanshaha kala noqoto Danjire Francisco Madeira islamarkaasna aan dib dambe loo siin waraaqaha dalku gal ka ah.
Sidoo kale Wasaaradda ayaa hey’adda socdaalka iyo Jinsiyadaha fartay inay go’aankaan ku wargeliso dhammaan cidda ay qusayso in Danjire Francisco Madeira dalka lakeeni karin maadaam uu yahay qof aan dalka laga rabin.
Ugu dambeyntii wasaaradda ayaa ku wargelisay islamarkaasna fartay Hey’adda socdaalka iyo Maareeyaha Garoonka Diyaaradaha ee Aadan Cadde in si ku meel gaar ah loo xiray dhammaan hawlahii terminal-ka MoveCon ilaa iyo amar dambe laga bilaabo 10/04/2022.
Amarka kasoo baxay wasaaradda ayaa yimid kadib markii Ururka Midowga Afrika uu ku gacan sayray go’aankii uu ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble dalka uga eryey wakiilka gaarka ah ee ururka u qaabilsan Soomaaliya Francisco Madeira.